Chọpụta ihe enwere ike ịhụ na San Antonio, Ibiza | Akụkọ Njem
Obodo San Antonio, makwaara dị ka San Antonio Abad ma ọ bụ Sant Antony de Portmany. Obodo Ibiza a bu otu n’ime ndi kachasi mara amara ma burukwa ọdụ ụgbọ mmiri dị mkpa n’àgwàetiti ahụ kemgbe mmalite mmepeanya mbụ. Taa ọ ghọọla ezigbo njem nleta na agwaetiti Ibiza.
Obodo a bụ ebe njegharị pụtara maka inwe oghere ndị mara mma, ọtụtụ osimiri ma na-enyekwa nnukwu ọdịbendị. Nke a bụ ihe mere ebe a ji bụrụ otu n'ime ebe kachasị njem nleta na agwaetiti Ibiza.
1 San Antonio na Ibiza
2 Church of san antonio
3 Emegharịrị na ọdụ ụgbọ mmiri
4 Osimiri na coves
5 Obodo ndị mara mma dị nso
6 Ihe na San Antonio
San Antonio na Ibiza
Ebila na ndị bi na ya kemgbe ọtụtụ narị afọ, ebe ọ bụ na achọtala eserese na ọgba ndị dị na Sas Fontanelle. N'ịbụ nke dị na Mediterenian, ndị Punics na ndị Rom letakwara ya. Ndi Arab we bikwa bi na ya, ndi webatara oru ugbo. Ugbua na narị afọ nke XNUMX, na Eze Jaime I nke Aragon, nke kewara agwaetiti ahụ ụzọ anọ, nke otu bụ Portmany. Ugbua na narị afọ nke iri na asatọ bụ mgbe e wuru obodo San Antonio. Ebe a bụ ọdụ ụgbọ mmiri dị mkpa ma bụrụkwa otu n’ime ebe ndị mmadụ kacha biri n’agwaetiti a.
Otu n'ime ihe ị ga-ahụ n'obodo San Antonio bụ ụka ochie ya. E hiwere ụlọ ụka a na narị afọ nke XNUMX mana ọ dị Emechara ụlọ na narị afọ nke iri na asaa. Mgbe ụfọdụ a na-eji ụka ahụ dị ka ụlọ elu na-agbachitere n'ihi ọnọdụ obodo ahụ chere ihu n'ụsọ oké osimiri, yana kwa ebe e wusiri ike, ebe ọ bụ otu n'ime ụlọ ya kachasị sie ike ma dị mkpa. Ruo narị afọ nke XNUMX, bishọp nke Tarragona na-achịkwa ndị mmadụ, bishọp mbụ nke Ibiza na-ejikwa ya.
Emegharịrị na ọdụ ụgbọ mmiri
Mpaghara ọdụ ụgbọ mmiri ka dị oke mkpa n'obodo a nke San Antonio. N'ebe ọwụwa anyanwụ a na-echekwa ebe a na-arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ ebe mara mma ịga ije, nwere nkwụ na isi iyi, ndị na-enwupụta n'abalị. Na mgbakwunye, na mpaghara a enwere ike ịchọta ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ iji nwee ike ịnụ ụtọ gastronomy nke agwaetiti ahụ mgbe ịnụ ụtọ ikuku dị ndụ.
Ọ bụrụ na enwere ihe pụtara iche na Ibiza niile, ọ bụ ụsọ mmiri na coves anyị nwere ike ịchọta na mpaghara ọ bụla. San Antonio bụ otu n'ime ebe ebe aja ndị a pụtara. Osimiri isi akpọ S'Arenal ọ dị n'akụkụ ebe a na-eme njem. Ọ bụ otu n'ime osimiri ndị mmadụ jikọtara ọnụ, n'ihi ọnọdụ ya, n'ihi na ọ nwere ụdị ọrụ ọ bụla yana kwa n'ihi na ọ na-enye mmiri dị jụụ ma na-emighị emi. Osimiri a nwere ndị na-eto eto na-ege ntị na ikuku dị egwu.
Na Osimiri Caló des Moro ọ ga-ekwe omume ịchọta ikpo okwu osisi maka sunbathing. Otu ụzọ n'ụzọ anọ nke elekere na ụkwụ ị nwere ike ịchọta Cala Gració na Cala Gracioneta. O kwere omume ịga ntakịrị site na mpaghara a iji hụ coves ndị ọzọ, dị ka Cala Bassa, Cala Conta ma ọ bụ Cala Salada.
Obodo ndị mara mma dị nso
Mgbe ị gara ntakịrị site na etiti San Antonio, ị ga-ahụ ụfọdụ obodo mara mma nke nwere amara ma bụrụ ndị na-ejupụta na ya, n'ihi ya, ha dị jụụ. Na obodo Santa Inés O nwere ubi nke osisi almọnd. N’akụkụ obodo ahụ ka mpaghara a maara dị ka Puertas del Cielo, ebe enwere ọnụ ugwu mara mma iji nwee ọmarịcha echiche. Nke a bụkwa ebe dị mma iji lelee ọdịda anyanwụ.
En San Rafael ọ ga-ekwe omume ịnụ ụtọ ezigbo echiche nke Dalt Vila. O nwere ulo uka mara mma ma nwekwaa ike ihu ihe omuma nke ihe ndi ejiri aka mee, ebe obu ebe enwere ike ihu ezi omenala Ibizan. Obodo ọzọ dị nso bụ San Mateo, ebe dị jụụ ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ ụzọ ụkwụ na oghere ndị njem njem agwaetiti anaghị eju.
Ihe na San Antonio
Mpaghara a nke Ibiza bụ ezigbo ọrụ, nwere ọtụtụ ihe ị ga-eme, ebe ọ bụ mpaghara ndị njem nleta. Na mpaghara a bụ ebe ụfọdụ ụlọ oriri na nkwari abalị kacha mkpa dị, dị ka Ihe ùgwù ma ọ bụ Amnesia. N'ime obodo ị nwekwara ike ịnụ ụtọ ụfọdụ ememme ndị na-eme ka ikuku dị na mbara afọ niile, dị ka Ememe Ike Ifuru na Jenụwarị ma ọ bụ Medieval Marinera Fair.
Na San Antonio de Ibiza ị nwekwara ike ịme ihe omume ndị ọzọ. Na egwuregwu mmiri nwere ike ịbụ nnukwu ntụrụndụ, karịsịa na-eche na ọ nwere ọdụ ụgbọ mmiri dị mkpa. Site ebe a ị nwere ike iji ụgbọ mmiri ma ọ bụ njem ụgbọ mmiri gaa mpaghara ndị ọzọ dị nso ma ọ bụ agwaetiti. Echiche nke ịgbazite ụgbọ mmiri oriri na ha na-ewu ewu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Ihe ị ga-ahụ na San Antonio, Ibiza